Inodziya: audiobook player yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Si unoda mutambi wazvino audiobook kune yavo yavanofarira Linux kugovera, ivo vanogona kusarudza kushandisa inotevera app yatichataura nezvayo nhasi, Inodziya.
Izvi ndizvo inoridza audiobook player yeLinux, chirongwa ichi chinoshandisa tekinoroji yazvino yeGTK3 uye ndechimwe chezvishandiso zvinoyemurika zvekutarisa mafaera eobook papuratifomu.
Mabhuku ehurukuro vanopa nzira iri nyore yeku "teerera" kumabhuku ako aunofarira kubva kune ako nhare mbozha kana kunyange pakombuta yako.
Ivo vakanyanya kunaka kuteerera paunenge uchiita chimwe chinhu, kungave kuri kushanda kunze kwekurovedza muviri, kubika mukicheni, kana kutarisa muchadenga munzira yekumba.
Iwe unogona kuteerera kune audiobook mafaera pane yakajairwa mumhanzi mutambi saRhythmbox, Clementine kana VLC. Zvinenge chero mutambi wenhau anokwanisa kutamba mimhanzi mafaera anogona kutamba audiobooks.
Somuenzaniso, audiobooks haana "muimbi" asi "muverengi"Asi iwe unogona zvakare kugadzirisa ne "munyori" kana "bhuku zita" - ese metadata minda ayo mazhinji desktop mumhanzi vatambi asinga ratidze.
Izvi zvinoita kufamba-famba uye kugadzirisa audiobook mafaera zvishoma zvinonyengera.
Mabhuku ehurukuro iwo zvakare akareba kupfuura yakajairwa mimhanzi faira (kazhinji maawa akawanda akareba). Mumhanzi wenguva dzose haamise chinzvimbo chako. Inotevera nguva iwe yaunoda kudzokera kuchigaro chako kuti uterere kune akati wandei maganhuro
Mabhuku ehurukuro iwo zvakare akareba kupfuura yakajairwa mimhanzi fairaSaka iwe uchazoda audiobook player inorangarira kwawakapedzisira kumira. Zvikasadaro, iwe uchafanirwa kunyora zvinogara zvichingoitika zvepfungwa nezvekwawakasiya kumashure.
1 About Unodziya
2 Heano mamwe maficha:
3 Maitiro ekuisa Unodziya paLinux?
Cozy Inotsigira DRM, mp3, m4a, flac uye ogg audiobooks uye chimwe chemaitiro ayo atinogona kuratidza ndechekuti inorangarira kuti yekupedzisira yekutamba chinzvimbo chinokutendera kuti utore uye uone mabhuku ekuteerera, munyori, muverengi uye misoro, pamwe nekubatanidza MPRIS.
Iyo yakagadziridzwa vhezheni inowedzera yeCozy yakazara inogoneka yekurara timer ficha iyo inovandudza kutumira kunze uye inogamuchira rutsigiro rwe m4a / mp4 kutamba.
Asi zvinosuwisa kuti haisati yaenderana ne m4b.
Heano mamwe maficha:
Tumira mabhuku ako ese eaudiyo kunzvimbo inotonhorera kuti uaongorore zvakanaka
Teerera kune DRM mp3, m4a (aac, ALAC,…), flac, ogg odhiyo mabhuku
Rangarira yako yekutamba chinzvimbo
Iyo timer inogona kusetwa kuvhara iyo application.
Ronga ma audiobooks ako nemunyori, muverengi uye zita
Dhonza uye udonhe kuendesa ma audiobook matsva
Wedzera nzvimbo dzakawanda dzekuchengetedza
Offline modhi! Izvi zvinokutendera iwe kuti uchengete audiobook pane yako yekuchengetera yemukati kana iwe ukachengetera ako audiobooks pane yekunze kana network network. Yakakwana yekuteerera uchienda!
Mpris kusangana (midhiya makiyi uye ruzivo rwekutamba rwe desktop desktop)
Yakagadziriswa muFedora uye yakaedzwa pasi pekutangaOS
Iko kunyorera kune interface inoshanda, inova "kudzorera kumashure" uye "kumbomira" Tinogona kuvawana mukona yekuruboshwe yebarbar, kwete mushure mekuburitswa kwechikamu.
Iwo mafirita e "Author" uye "Reader" ave kuratidzwa padivi repadivi, nepo ruzivo rwemunyori ruchiwedzerwa kune snippet metadata, iyo inoratidzwa pane yega yega audiobook kavha.
Maitiro ekuisa Unodziya paLinux?
Kuti tigoisa ichi chakanakisa kunyorera pane yedu system, Tinogona kuzviita nerubatsiro rwePappak paketi.
Zvakakwana kuve nerutsigiro rwakawedzerwa kusisitimu yedu yekuisa mashandiro eiyi tekinoroji, kana usati wawedzera izvozvi, unogona kuongorora iyo inotevera posvo kwandinogovana nzira.
Iye zvino kuve nechokwadi chekukwanisa kuisa Flatpak kunyorera pane yedu system, isu tichavhura terminal uye isu tichaenda kunotevera kuraira:
Uye takagadzirira nayo, tichave takaisa chishandiso mune yedu system iyo ikozvino yagadzirira kushandiswa uye iwe unogona kuiwana mune yako application menyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Inodziya: audiobook player yeLinux
HandBrake: yakanakisa multimedia transcoder yeLinux